Huawei Mate 30 oo aan lahayn barnaamijyada Google: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Wararka Gadget
Huawei Mate 30 iyada oo aan lahayn barnaamijyada Google: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Eder Esteban | | Mobiles, Telefoon
Khamiistii la soo dhaafay ayaa noocyada cusub ee Huawei Mate 30 si rasmi ah loo soo bandhigay, labadiisa taleefan ee cusub. In kasta oo muraayadaha wanaagsan, naqshad wanaagsan, ama kamaradaha wanaagsan, waa maqnaanshaha codsiyada Google iyo adeegyada Google Play maxaa qabsaday cinwaannada ugu badan kiiskan, iyo sidoo kale adeegsiga nooca isha furan ee Android.
Xayiraadda ay shirkaddu ku hayso Mareykanka Waa wax si buuxda u saameynaya noocyadan kala duwan ee Huawei Mate 30. Sababtaas awgeed, taleefannada ayaa lagu qasbay inay adeegsadaan nooc furan oo ah nooc ka mid ah Android, oo aan laga helin barnaamijyada ama adeegyada Google.
1 Ma jiro barnaamijyada Google iyo adeegyada Google Play
2 Muxuu leeyahay Huawei Mate 30 halkii?
3 Isha Furan ee Android
4 HarmonyOS ahaan nidaamka qalliinka
Ma jiro barnaamijyada Google iyo adeegyada Google Play
Barnaamijyada Google kuma imaan doonaan si toos ah taleefoonada, waana wax todobaadyadii la isla dhexmarayay. Sidaa darteed ma jiri doono Adeegyada Google Play lagu rakibay moodelladan asal ahaan ka soo jeeda kuwan Huawei Mate 30. Taasoo macnaheedu yahay in taleefannadu aysan lahayn Google Play, dukaanka arjiga, ama barnaamijyada sida Khariidadaha, Gmail ama Kaaliyaha oo lagu rakibay qaab ahaan. Sidoo kale, markii hore lama soo degsan karin.
In kasta oo laga helay Huawei haddana waxaa la xaqiijiyay in marin u heliddooda la fududeyn doono, laakiin sida ay taasi macquul ku noqon karto lama cayimin. Huawei Mate 30 ma noqon doono telefoonnadii ugu horreeyay suuqa ee aan lahayn adeegyada Google Play. Moodooyin badan oo ka mid ah noocyada Shiinaha ayaa yimaada iyaga la'aanteed, kaliya in kiiskan rakibiddu waxay noqon doontaa mid adag, in kasta oo nooca Shiinaha uu furi doono bootloader-ka, markaa waa inay suurtagal noqotaa.
Sidaa darteed, taleefannadu ma aha inay iyagu leeyihiin iyaga hooyo ahaan. Daarista taleefanka qaybtani kama mid noqon doonto noocyada kale ee Android, maxaa yeelay ma yeelan doonno isla codsiyo ama kuma galno koonto Google ah, sida ay tahay illaa hadda. In kasta oo shirkaddu ay dammaanad qaaddo in Huawei Mate 30 waxay la jaan qaadayaan barnaamijyada sida YouTube, Gmail ama Google Maps. Kaliya iyagu ma imaan doonaan rakibid ahaan markii la joogo xilliganna habka la siin doono dadka isticmaala si ay marin ugu yeeshaan lama garanayo.
Marka codsiyada la rakibo, wax walba waxay ku shaqeyn doonaan si caadi ah taleefanka, sidii aan u baranay. Shakiga ilaa hadda waa sidee suurta gal u noqon doontaa in la helo Adeegyada Google Play ama barnaamijyada Google mid ka mid ah aaladahaas. Tani waa wax hadda laga shaqeynayo, sida ay ka yiraahdeen soo-saaraha laftiisa, markaa toddobaadyo yar gudahood waa inay jirtaa caddayn dheeraad ah oo la xiriirta arrintaas.
Muxuu leeyahay Huawei Mate 30 halkii?
Maqnaanshaha Adeegyada Google Play iyo codsiyada Google waxaa lagu kabayaa adeegyadeeda. Shirkadda ayaa nooga tagtay HSM (Adeegyada Mobile-ka ee Huawei) labada taleefan, marka lagu daro inay leeyihiin dukaan codsi u gaar ah, App Gallery. Maalgashi muhiim ah ayay shirkaddu samaynaysaa si loo ballaariyo tirada codsiyada ku jira, oo hadda ka badan 11.000, si dadka isticmaala Huawei Mate 30 ay u helaan.
Intaa waxaa dheer, laga bilaabo saxiixa waxaa la xaqiijiyay in HSM waxay ku lug leedahay soo bandhigida GSM-kaaga, GPS iyo khariidadahaaga. Marka adeegyada lagama maarmaanka u ah taleefannada Android kama maqnaan doonaan moodelladan. Waxay u badan tahay, in shirkaddu ay adeegsan doonto khariidadeedaheeda, oo ay horay ugu dhawaaqeen inay horumarinayaan isla markaana rasmi ahaan u shaqeyn doona bisha Oktoobar. Nooc ka mid ah Khariidadaha Google, laakiin shirkadda lafteeda.
Qaar ka mid ah codsiyada caadiga ah ee Android sidoo kale waa la beddeli doonaa. Baloogan ayaa kaa horjoogsanaya inaad ku isticmaali karto Kaaliyaha Google taleefannada. Sidaa darteed, shirkaddu waxay naga tagtay kaaliyaha Huawei, Kaaliyaha Huawei Mate 30 kan, kaas oo keenaya hawlo badan oo aan horey ugu ogaanay kaaliyaha Google sida caadiga ah. Waxaad ku sameyn kartaa ficil taleefanka, sida wicitaanada, akhrinta fariimaha, barnaamijyada furan ama qaar kaloo badan. In kasta oo ay u badan tahay inaysan yeelan doonin dhammaan ficillada ama howlaha uu kaaliyaha Google sida caadiga ah na siiyo.
Isha Furan ee Android
Isbedelka kale ee weyn ee Huawei Mate 30 waa isticmaalka isha furan ee Android. Go'doominta Mareykanka ayaa ku qasbeysa inay aadaan qaybta furan ee nidaamka hawlgalka, oo ay heli karaan qof kasta oo doonaya inuu isticmaalo. Intii ay siinayeen EMUI 10, lakabkeeda qaabeynta, si loo helo waayo-aragnimada aan ugu baran jirnay Android.
Isticmaalayaasha uma baahna inay ka walwalaan cusbooneysiinta kiiskan, tan iyo ilaha furan ee Android, qaybtiisa 10, heli doonaa wararka amniga markasta. Marka taleefannada ayaa laga ilaalin doonaa hanjabaadaha. Noocyada mustaqbalka ee nidaamka hawlgalka ayaa sidoo kale lagu heli doonaa, qaabkan furan ee furan, iyada oo aan lahayn codsiyada Google.
EMUI 10 interface ayaa sidoo kale la cusbooneysiin doonaa, Xaqiiqdii u guurista EMUI 11 sanadka soo socda. Dareenkaan, ma ahan inay jiraan isbeddelo badan marka la barbar dhigo noocyadii hore ee lakabka.
HarmonyOS ahaan nidaamka qalliinka
Bilowgii Ogosto, Huawei waxay soo bandhigtay nidaamkeeda hawlgalka, loo yaqaan HarmonyOS. Nooca Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu u adeegsado noocyo badan oo aalado ah, laakiin inta badan dhexdiisa barta Internetka ee Waxyaabaha. Markaa waa wax aan ka arki karno alaabada sida telefishinnada, ku hadlayaasha iyo qaar kaloo badan. U isticmaalkiisa taleefannada ayaan meesha laga saarin.
In kasta oo HarmonyOS aysan weli diyaar u ahayn in lagu isticmaalo taleefannadaTaasi waa sababta aysan u soo gaarin Huawei Mate 30. Calaamadda Shiinaha ayaa sheegeysa in mudnaanteeda ay tahay in la isticmaalo Android, laakiin isticmaalka nidaamkan qalliinka waa wax sidoo kale la tixgelinayo. In kasta oo warbaahinta qaar ay hadal hayaan adeegsiga nidaamkan, kala-guurka wuxuu qaadan karaa dhowr sano. Markaa waa wax laga yaabo inay ku jiraan shaqooyinka, laakiin waxay qaadan doontaa wakhti in si rasmi ah loo noqdo.
Waa inaannaan meesha ka saarin in mustaqbalka dhow ay ku dambayn doonto adeegsiga nidaamkan hawlgalka ee telefoonnada sumadda. Gaar ahaan haddii xiriirka Mareykanka uu weli ahaado mid xunLaakiin calaamaddu waxay sii wadaa isku dayga inay ku isticmaasho Android taleefannadeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Huawei Mate 30 iyada oo aan lahayn barnaamijyada Google: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
AUKEY waxay soo bandhigeysaa shan xeedho oo xeel dheer oo mobilada iyo laptop-ka ah